जेठ २४, दार्चुला । अपिहिमाल गाउँपालिका–३ को घट्टेखोलामा १०० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, अपिहिमाल गाउँपालिका, स्थानीय साझेदारी पूर्वाधार विकास कोष र उपभोक्ताको लगानीमा विद्युत् उत्पादनको अन्तिम तयारी थालिएको हो ।
विद्युत्को इन्टेक, विद्युत्गृह, क्यानललगायतका काम सकिएको छ । मुख्य पाइप लाइन जडानको काम मजदूर अभावले रोकिँदा निर्माण कार्य केही ढिलाइ भएको निर्माण समितिका अध्यक्ष नन्दनसिंह धामीले जानकारी दिए ।
‘अहिले यार्सागुम्बा संकलनको समय चलेको कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ’, अध्यक्ष धामीले भने, ‘मजदूर पाइयो भने एक महीनाभित्र विद्युत्को काम सकिने छ ।’ पाथाको घट्टेखोलामा निर्माण भइरहेको विद्युत्को ६८० मिटर लम्बाइको पाइप लाइन छ । विद्युत् निर्माणअन्तर्गत विद्युतको पोल गाड्नेदेखि तार विस्तारको काम बाँकी छ ।
अहिले पनि मजदूरको खोजी भइरहेको छ । मजदूर अभावमा रोकिएको काम पुनः शुरु गराउन गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्द सिंह मन्यालले समेत आग्रह गरेका छन् । ‘निर्माणको काम निकै ढिलो भयो, मजदूर नपाएर काममा ढिलाइ गर्न मिल्दैन’ उनले भने । पालिकाभित्र मजदूर नपाए बाहिरबाट ल्याएर भए पनि समयमै विद्युत् बाल्न उहाँले समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।
विद्युत् निर्माण गर्न सके उज्यालो अपि अभियानमा सघाउने पुग्नेछ । यो विद्युत् साविकको खण्डेश्वरी गाविसको ७०० घरधुरीमा पुर्‍याउने योजना छ । खण्डेश्वरीमा विद्युत् खपत हुन नसके साविकको घुसा गाविसम्म विस्तार गर्न सकिने जानकारी दिइएको छ ।
सडक पहुँच नपुगेको अपिहिमालको पाथासम्म विद्युतको सामान ढुवानीमा लागत बढेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धामी बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले विद्युतको ठूला मेसिन तथा ट्रान्सफर्मर शैल्यशिखर नगरपालिकाको शिखरबाट हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गर्‍यौँ । अहिले पनि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मकरीगाडसम्म मात्रै सडक पहुँच छ । सडक पहुँचबाट एक दिन हिँडेपछि मात्रै निर्माणाधीन योजनास्थल पुग्न सकिन्छ ।’
अहिलेसम्म विद्युत् निर्माणका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले रू. दुई करोड ८५ लाख, गाउँपालिकाले रू. ९० लाख, स्थानीय साझेदारी पूर्वाधार विकास कोषअन्तर्गत रू. ५० लाख र स्थानीय उपभोक्ताको रू. ५७ लाख लागतमा विद्युत् निर्माण भइरहेको छ । रासस